Kedu ihe bụ satịlaịtị: njirimara, ụdị, ojiji na ọrụ | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 06/08/2021 10:00 | Astron
N'ezie, ị nụla na ọnwa bụ satịlaịtị. Agbanyeghị, ọ bụghị mmadụ niile maara nke ọma kedu ihe bụ satịlaịtị. Nke a bụ maka na e nwere ma satellites eke na eke. Onye ọ bụla n'ime ha nwere njirimara na ọrụ dị iche iche, a ga -amụrịrị ya iche.
Ya mere, n'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe satịlaịtị bụ, njirimara ya na mkpa ọ bụla n'ime ha dị.
1 Kedu ihe bụ satịlaịtị
2 Ụdị satịlaịtị
2.1 Eke Satellites
2.2 Satellite satịlaịtị
3 Jiri na arụ ọrụ
Satellite nwere ike nwee nkọwa abụọ dabere ma anyị na -ekwu maka akụkụ eke ma ọ bụ akụkụ aka. Ọ bụrụ na anyị na -arụtụ aka na akụkụ eke, anyị ga na -ekwu maka ihe dị na mbara igwe na -enweghị ntụpọ nke na -agagharị na mbara ala mbụ. Nke abuo, Satellite wuru bụ ngwaọrụ etinyere na gburugburu ụwa maka ebumnuche sayensị, agha ma ọ bụ nkwukọrịta.
Satellite eke bụ ihe dị na mbara igwe nke mmadụ na -ekeghị nke na -agba okirikiri ọzọ. Ogo nke satịlaịtị na -adịkarị obere karịa mbara igwe nke ọ gara n'ihu na -agba gburugburu. Mmegharị a bụ n'ihi ike na -adọrọ mmasị nke nnukwu ihe na -ebu n'ahụ obere ihe. Ọ bụ ya mere ha ji amalite ịrụ ọrụ n'esepụghị aka. Otu ahụ ka ọ dịkwa maka okirikiri nke ụwa gbasara anyanwụ.
Mgbe anyị na -ekwu maka Satellites eke, a na -akpọkarị ya aha nkịtị nke satellites. Ebe anyị na -akpọ ọnwa anyị ọnwa, ọnwa ndị ọzọ na -anọchite anya otu aha. Oge ọ bụla anyị na -eji okwu ọnwa, ọ na -ezo aka na mbara igwe nke na -agagharị na mbara igwe ọzọ na mbara igwe, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịgagharị. mbara ala dwarf, dị ka mbara ala dị n'ime, mbara ala mpụga, na ọbụna obere ihe ndị ọzọ dị na mbara igwe dị ka asteroids.
Usoro mbara igwe Ọ nwere mbara ala 8, mbara ala dwarf ise, comets, asteroids na opekata mpe ihe ruru satịlaịtị 5. Nke kacha ewu ewu bụ ọnwa anyị. Ọ bụrụ na anyị amalite ịtụle ọnụọgụ ọnwa n'etiti mbara ala dị n'ime na mbara ala dị n'elu, anyị ga -ahụ nnukwu ọdịiche. Mbara ala dị n'ime nwere satellites ole ma ole. N'aka nke ọzọ, mbara ala ndị fọdụrụ, nke a na -akpọ exoplanets, nwere ọtụtụ satellites n'ihi oke ha.
Enweghị satellites eke sitere na gas. A na -eji satịlaịtị niile eke sitere n'oké nkume. Ihe kachakarị bụ na ha enweghị ikuku nke ha. N'ihi ntakịrị ha, ihe ndị a dị na mbara igwe enweghị ikuku kwesịrị ekwesị. Inwe ikuku na -ebute mgbanwe dị iche iche na mgbanwe nke usoro mbara igwe.
Ọ bụghị satellites niile sitere n'okike bụ nha. Anyị chọpụtara na ụfọdụ buru ibu karịa ọnwa ebe ndị ọzọ pere mpe. Ọnwa kasịnụ nwere dayameta nke kilomita 5.262, a na -akpọ Ganymede, ma bụrụ nke Jupiter. Ọ bụghị ihe ijuanya na mbara ala ndị kacha ibu na mbara igwe kwesịkwara inwe ọnwa kachasị ukwuu. Ọ bụrụ na anyị enyochaa egwu ndị ahụ, anyị ga -achọpụta ma ha na -adị mgbe niile ma ọ bụ na -adịghị agbanwe agbanwe.
Banyere morphology, otu ihe ahụ ga -eme. Ụfọdụ ihe dị okirikiri, ebe ndị ọzọ na -adịkarị n'ụdị. Nke a bụ n'ihi usoro ọzụzụ ha. Nke a bụkwa n'ihi ọsọ ya. Ihe ndị na -eme ngwa ngwa na -eburu ọdịdị na -adịghị ahụkebe karịa nke na -etolite nwayọ, dị ka trajectories na oge. Dị ka ọmụmaatụ, Ọ na -ewe ihe dịka ụbọchị iri abụọ na asaa ka ọnwa na -agba ụwa gburugburu.
Ha sitere na teknụzụ mmadụ ma ejiri ya nweta ozi gbasara ihe ndị dị na mbara igwe ha na -amụ. Ọtụtụ satellites mmadụ mere na-agba ụwa gburugburu. Ha dị nnukwu mkpa maka mmepe sayensị na teknụzụ mmadụ. Taa, anyị enweghị ike ime n'enweghị ha.
N'adịghị ka satellites ndị sitere n'okike dị ka ọnwa, satellites mmadụ wuru. Ha na -agagharị ihe ndị karịrị ha onwe ha n'ihi na ike ndọda dọtara ha. Ha na -abụkarị igwe dị mgbagwoju anya na teknụzụ mgbanwe. E zigara ha na mbara igwe iji nweta ọtụtụ ozi gbasara ụwa anyị. Anyị nwere ike ikwu nke ahụ mpekere ma ọ bụ iberibe igwe ndị ọzọ, ụgbọ elu nke ndị na-enyocha mbara igwe na-akwado, ọdụ ụgbọ elu orbital, na nyocha gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya. anaghị ewere ha na satellites wuru wuru.
Otu njiri mara nke ihe ndị a bụ na rọketi agbagburu ha. Rọketi abụghị ihe ọ bụla karịa ụdị ụgbọ ala ọ bụla, dị ka ngwa agha, ụgbọ elu, ma ọ bụ ụgbọ elu, nke nwere ike ịkwalite satịlaịtị elu. Emebere ha ka ha soro ụzọ dịka ụzọ siri guzobe. Ha nwere ọrụ ma ọ bụ ọrụ dị mkpa iji mezue, dị ka ikiri igwe ojii. Ọtụtụ n'ime Satellites wuru -wuru nke na -agba ụwa anyị gburugburu na -aga n'ihu na -agbagharị gburugburu ya mgbe niile. Nke abuo, anyị nwere satellites ezigara na mbara ala ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ndị dị na mbara igwe, nke a ga -enyocha maka ozi na nleba anya.
Jiri na arụ ọrụ
Ọnwa na -eme na ebili mmiri na n'usoro ndụ nke ọtụtụ ihe dị ndụ. E nwere ụdị satellites okike abụọ:
Mgbe Satellites nkịtị: Ha bụ ahụ ndị na -agbagharị gburugburu nnukwu ahụ n'otu ụzọ ahụ ọ na -agba anyanwụ gburugburu. Nke ahụ bụ, orbits nwere otu echiche n'agbanyeghị na otu dị ukwuu karịa ibe ya.
Oge ufodu satellites: ebe a anyị na -ahụ na orbits ndị ahụ dị anya na mbara ala ha. Nkọwa maka nke a nwere ike ịbụ na emeghị ọzụzụ ha nso ha. Ọ bụrụ na ọ bụghị, enwere ike weghara satellites ndị a site na ndọda ndọda nke ụwa. Enwere ike nwee mmalite nke na -akọwa ịdị anya nke mbara ala ndị a.
N'etiti Satellites wuru, anyị na -ahụ ihe ndị a:
Mbido ala: ha bụ ndị na -aga site n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda anyanwụ n'elu akara akara. Ha na -agbaso ntụzịaka na ọsọ nke ntụgharị ụwa.
Pola: A na-akpọ ha nke a n'ihi na ha na-agbatị site n'otu osisi ruo na nke ọzọ na mpaghara ugwu na ndịda.
N'etiti ụdị ihe abụọ a, anyị nwere ụfọdụ ụdị satellites ndị ahụ bụ maka ịhụ na ịchọpụta njirimara ikuku, oke osimiri na ala. A na -akpọ ha satellites gburugburu. Enwere ike kewaa ha n'ụdị ụfọdụ, dị ka ịme geosynchronization na mmekọrịta nke anyanwụ. Nke mbụ bụ mbara ala ndị na -agba ụwa gburugburu n'otu ọsọ dịka ọsọ ụwa na -agba gburugburu. Ọnụọgụ nke sekọnd bụ ọnụọgụ sekọnd nke na -agafe n'otu oge n'ụwa n'otu oge kwa ụbọchị. Ọtụtụ n'ime satịlaịtị telivishọn ndị a na -eji ekwu maka ihu igwe bụ satellites jiostationary.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ihe satịlaịtị na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Kedu ihe bụ satịlaịtị